Nepal Deep | घरमा साङ्ला परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरि भगाउनुहोस्
घरमा साङ्ला परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरि भगाउनुहोस्
काठमाडौँ। गर्मी बढेसँगै प्रायः भान्सामा साङ्ला सलबलाउन थाल्दछन् । कतिलाई साङ्ग्ला घिनलाग्दा लाग्छन् भने धेरै महिला त योसँग डराउनेसमेत गर्दछन् । साङ्ग्लाले खाना, कपडा लगायत कोठाका धेरै सामग्रीमा क्षति पुर्याउँछ ।
साङ्ला गर्मीमा एकदमै छिटो फैलन्छ । यसको सन्तान पैदा गर्ने क्षमता समेत उच्च हुन्छ । साथै यसलाई सजिलै मार्न पनि सकिदैन । किनभने यसको टाउको छिनाइयो भनेसमेत केही दिनसम्म यो जीवित रहन सक्छ । यो प्राय: भान्साको कुनाकाप्चा, खाट, दराज आदिमा लुकेर बस्छ । यसरी लुकेर बस्ने साङ्ला भगाउन केही घरेलु विधि पनि अपनाउन सकिन्छ ।
१. साङ्ला भगाउने पहिलो उपाय हो यसलाई अनुकुल नहुने गरी घरको सरसफाई गर्नु । किनभने सफा र उज्यालो र सफा स्थान साङ्लालाई अनुकुल हुदैँन ।
२. लसुन, प्याज र मरिचलाई बराबर मिलाएर पिसेर बनाइएको पेस्टलाई पानीमा मिसाएर घोल तयार पार्ने । उक्त घोललाई एउटा बोत्तलमा राखेर साङला बस्ने कुना काप्चामा नियमित छर्कने गरेमा केही समयमै साङ्लाको समस्याबाट राहत मिल्दछ ।
३. सख्खर र बेकिङ सोडालाई बराबर मात्रामा मिलाउने र साङ्लो बस्ने स्थानमा राख्ने । यसको छेवैमा थोरै पानी पनि राखिदिने । सोडा खाएपछि यसले पानी पिउछ र मर्छ । बेकिङ सोडा यसको पेटमा गएपछि हानी पुर्‍याउँछ ।
४. पानीमा डिटर्जेन्ट घोलेर साबुनको घोल बनाउने । यसकालागि कुनैपनि साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस घोललाई स्प्रेको माध्यामबाट साङ्ला बस्ने ठाँउमा छर्कनुपर्छ ।
संविधान दिवस : राष्ट्रपतिद्वारा ९०३ जनालाई विभूषण प्रदान